मुकुन्देको ‘भाग्य र पिडा’, अर्थशास्त्रमा डिग्री गरेकी श्रीमती, विवाह खर्चका लागि आर्थिक सहयोग माग्दै ! | Dainik News Nepal
मुकुन्देको ‘भाग्य र पिडा’, अर्थशास्त्रमा डिग्री गरेकी श्रीमती, विवाह खर्चका लागि आर्थिक सहयोग माग्दै !
विवाह बन्धनमा बाधिदै मुकुन्द घिसिरे र इन्दिरा सँग्रौला
काठमाडौं । रत्नपार्क हुँदै सामाजिक सञ्जालदेखी विभिन्न माध्यमबाट चर्चामा छाएका मुकुन्द घिमिरे उर्फ ‘मुकुन्दे’ फेरि एकाएक चार्चामा आएका छन् । उनलाई कतिपयले एक दार्शनिक व्यक्तिको रुपमा लिन्छन् भने धेरैले उनलाई रत्नपार्कमा कराउने व्यक्ति भनेर चिन्छन् ।
कुनै बेला रत्नपार्कको पिपलको रुखमा चढेर भाषण गर्ने उनी हिजोआज फेरी एकाएक चार्चामा आउनुको कारण हो इन्गेजमेन्ट । भोजपुरमा जन्मिएका मुकुन्द घिमिरेले यही मंसिर ११ गते झापा सुरङ्गाकी इन्दिरा संग्रौलासँग औंठी र फूलमाला साटासाट गरी इन्गेजमेन्ट गरेका हुन् । र्भखर मात्र इन्गेजमेन्ट गरेका घिमिरेले केही बर्ष अघिदेखि नै इन्दिराको नाम सामाजिक सञ्जालमा लिइराखे पनि स्पष्ट भने खुलाएका थिएनन् ।
उनले समाजिक सञ्जालमार्फत प्राय धेरै कुराहरु विपक्षमा नै रहेर लेख्ने हुनाले केही मानिसहरु बारम्बार अहिलेसम्म एउटा केटी पट्याउन नसक्ने यस्तो उस्तो भनेर नबस भन्ने जस्ता शब्दहरु देखिन्थ्यो भने तत्पश्चात् केही महिना अघि उनले इन्दिरालाई भित्र्याउने कुरा सामाजिक सञ्जालमा लेखेपछि उनका फ्यानहरुले छिटो भित्र्याउन पर्यो भन्दै शुभकामना दिएका थिए ।
मुकुन्द घिमिरे र इन्दिरा संग्रौला मंसिर ११ गते इन्गेजमेन्ट लगत्तै एक मिडियासँग कुराकानी गर्दै आफूहरुबीच पहिले देखि नै चिनजान भएको बताएका छन् भने सोही क्रममा इन्दिरा संग्रौलाले मागी बिवाह भएको बताएकी छिन् । ‘पहिलेदेखि नै चिनजान भएपनि दुई पटक मात्र भेट्यौं’ उनले भनिन् ।
र्भखर मात्र इन्गेजमेन्ट गरेको यो जोडिले मंसिरको अन्तिम तिर बिवाह गर्ने बताएको छ । उक्त मिडियासँगको कुराकानीमा इन्दिरा संगा्रैलाले मुकुन्द घिमिरेको बारेमा खुलेर प्रशंसा गरेकी छिन् । उनले भनेकी छिन्, ‘म पनि पढेको मान्छे हुँ उहाँ इमोसनल हुनुहुन्छ, उहाँले बुझेर नै कुराहरुको विश्लेषण गर्नुहुन्छ भने कतिपय कुराहरु त राम्रो नराम्रो भइहान्छ । त्यसलाई सुधार गरि सहि मार्गमा लैजान सकिन्छ’ ।
इन्दिरा संग्रौलाले झापामा जन्मिए पनि अहिले चितवनमा बस्दै आएको बताएसँगै त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अर्थशात्र विषयमा डिर्गी गरेको बताएकी छिन् । इन्गेजमेन्ट भइसकेता पनि बिवाहपछि मात्रै दुबैजना संगै बस्ने संग्रौलाको भनाइ छ । अहिले भने मुकुन्द काठमाडौंमा र इन्दिरा चितवन बस्दै आएका छन् ।
यस्तै मुकुन्द घिमिले भने सबैको आशिर्वाद नै आफूले जोडि पाएको बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘सबैको आशिर्वाद लाग्यो, चालीस कटे पनि राम्रो घरझम हुँदैछ एकदम खुशी छु, धेरैलाई मेरो विबाह भएको हेर्ने मन थियो त्यो पनि पुरा भयो’ ।
आगमी दिनमा एकअर्काको साथ र सहयोगी मनले अगाडि बढ्ने यो जोडिले बताएको छ । यसैगरी आश्र्चयको कुरा त इन्गेजमेन्टपछि मुकुन्द घिमिरले बिवाहको लागि भने सामाजिक सञ्जालमार्फत् सहयोग अपिल समेत गरेका छन् । के उनलाई बिवाह खर्चको लागि अरुको सहयोग नै आवश्यक हो त ?
मुकुन्द घिमिरेले फेसबुकमा गरेको अपिल
यस्तै २०३५ सालमा भोजपुरमा जन्मिएका मुकुन्द घिमिरे छोटो अवधिमै एक सेलिब्रेटि जस्तै बनेका छन् । उनी २०५८ देखि २०७० सम्म रत्नपार्कमा भाषण गर्दै आएदेखी नै चर्चाका रहेका थिए । यतिबेला भने उनको चर्चा सामाजिक सञ्जालमा बढि हुनेको गरेको छ ।
२०५८ देखि २०७० सालसम्म रत्नपार्कमा भाषण गर्दै हिड्ने मुकुन्द पछिल्लो समय भने सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, ट्वीटरदेखी पछिल्लो समय मनोरञ्नको रुपमा एकदमै प्रयोग हँदै आएको टिकटकसम्म जोडिएका छन् । सामाजिक सञ्जालमा उनले आफूलाई भविष्याको कारार्यकारी राष्ट्रपति दाबी गर्दै आएका छन् ।
उनले मुकुन्दल्याण्डका जनतालाई सुख र शान्तिले बस्न पाउने व्यवस्था आफूले मिलाउने पनि बताउँदै आएका छन् । बुढेसकालसम्ममा कार्यकारी राष्ट्रपति बनेर मुलुकको अनुहार फेर्ने महत्वकांक्षा सुनाउने मुकुन्दलाई धेरैले पागको उदाहरण समेत दिनेको पाईन्छ । तर उनी भने आफूलाई राजनीतिक विश्लेषक भएको दबी गर्दै आएका छन् ।
आम मानिसभन्दा आफू धेरै फरक रहेको बताउने उनी मुकुन्दल्याण्डको उद्घोष गर्दै आएका छन् । साथै उनले पहाडमा रेल चलाउने, तराईमा हेलिकोप्टरबाट बिउ छरी समृद्ध नेपाल बनाउने जस्ता विभिन्न परिकल्पनाहरु सार्वजनिक गर्दै आएका छन् ।
मुकुन्द घिमिरे उर्फ 'मुकुन्दे'